Ogaden News Agency (ONA) – Sanbaloolshe & Saacid oo Xilal Ku Sheegii Laga Xayuubiyay.
Sanbaloolshe & Saacid oo Xilal Ku Sheegii Laga Xayuubiyay.
Posted by ONA Admin	/ October 30, 2017
Dowladda Soomaaliya ayaa shaqada ka caydhisay labo sargaal oo sarsare oo dhanka ammaanka ah . Tillaabadan ayaa ku soo beegantay ka dib laba qarax oo mataano ah oo shalay ka dhacay Muqdisho halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 27 qof.
Taliyihii booliiska Soomaaliya Cabdi Xakin Daahir Saciid iyo agasimihii hay’ada nabad sugida qaranka Cabdillahi Maxamed Sanbalooshe ayaa labadaba xilka laga qaaday. Go’aanka xil ka qaadista saraakiishan ayaa yimid ka dib kullan degdeg ah oo ay yeesheen golaha xukuumada dowlada Soomaaliya.
Kooxda Al-shabab ayaa sheegatay masuuliyada qaraxyadii sabtidii ka dhacay magaalada muqdisho. Qaraxyadii sabtidii ee Muqdisho ayaa ku soo beegmay laba todobaad ka dib markii ugu yaraan 358 qof ay ku dhinteen weerarkii ka dhacay isgoyska Soobe. Kooxda Al-shabab ayaa diiday oo beenisay in ay iyagu ka dambeeyeen weerarkii Soobe.